Ndị na -emepụta ngwaahịa, ndị na -ebubata ya - ụlọ ọrụ ngwaahịa China
herbal ọgwụ maka anụmanụ
petmeds maka nduru nduru
petmeds maka nkịta nkịta
ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ
Ihe mgbakwunye nri 3% nke ihe mbido
2.5% ndị na -ebido broiler na -eri nri premix
Ihe mgbakwunye nri 5% nke ihe ọkụkụ
Ihe mgbakwunye nri 5% nke ihe mbido
4% etiti ezi nri premix
5% nri nri ehi ehi
5% nri nri broiler mmalite
5% ihe mgbakwunye nri na -emecha oyi akwa
Ihe mgbakwunye nri 3% nke ihe ọkụkụ
4% piglets na -eri nri premix
5% nkwụnye nri ọbọgwụ
3% ntinye akwụkwọ nri broiler
4% ime ezi nri na -eri nri premix
5% nri broiler na -eri nri premix
3% ihe mgbakwunye nri ngwụcha ngwụcha
4% ara na -enye nri ezì nri premix
2.5% nri broiler na -eri nri premix
Ọgwụ stool mmiri
Ọgwụ stool mmiri nwere isi ihe mejupụtara: Andrographis paniculata, ifuru poplar, eucommia epupụta, oregano, peel persimmon, peel pọmigranet, wdg Ọrụ na ihe ngosi: broiler: Ọ nwere mmetụta pụrụ iche maka ọkwa ikpeazụ nke mwepụ mmiri na nkwụsị nri na -enweghị ịba ụba, na -adịkwa irè mgbochi nke mbufụt atọ. Layer: A na-eji ya agwọ salpingitis dị ka nkochi ime akwa peritonitis, akwa aja aja, akwa echekwara n'ọbara, akwa dị nro, wdg na ịtọba ọkụkọ. Ojiji: Broiler: 500ml mi ...
Prefect Imeju na splin
Prefect Liver na splin Ihe ndị mejupụtara: Bakteria, Forsythia, Platycodon, Chuanmu Tong, Atractylodes, Bupleurum, Cohosh, Green Peel, Tangerine Peel, Eupatorium, Nepeta, Parsnip, Bengal, Angelica, Morning Glory, wdg. ọbara ọgbụgba, ọbara ọgbụgba nke anụ ahụ na akụkụ ahụ dị iche iche, mbelata mmebe ahụ, mbelata nri, ịwụpụ anya, oche na -arapara, wdg.
Gland gastritis gwọọ
Gland gastritis gwọọ isi ihe mejupụtara: Codonopsis pilosula, ginger a mịrị amị, licorice na atractylodes Njirimara: ngwọta aja aja na-acha odo odo Ngosipụta: Avian na-efe efe glandular gastritis, gizzard keratitis. Mgbaàmà akwara: 1. Afọ afọ nke ọkụkọ na-arịa ọrịa na-aza aza dị ka globular na mmiri ara ehi na-acha ọcha, enwere ike ịhụ ọdịdị nke isi awọ na-acha ntụ ntụ ka ejiri nlezianya leba anya; Mbipụ ahụ na -egosi ndim na edema nke mgbidi afọ gland, acupressure nwere ike ịpụta mmiri serous, s ...
Ivermectin drench 0.08% MGBE: Nwere kwa ml. : Ivermectin ………………………………… .. 0.8 mg. Ihe mgbaze mgbasa ozi …………………………… .. 1 ml. Nkọwa: Ivermectin bụ nke otu avermectins ma na -eme ihe megidere okirikiri na nje. Nkọwa: ọgwụgwọ nke eriri afọ, inyi, arụ ọrụ ngụgụ, oestriasis na scabies. Trichostrongylus, Cooperia, Ostertagia, Haemonchus ...
Toltrazuril Oral solution 2.5% MGBE: Nwere otu ml: Toltrazuril ………………………………………… 25 mg. Ihe mgbaze mgbasa ozi ……………………………………… 1 ml. Nkọwa: Toltrazuril bụ anticoccidial nwere ọrụ megide Eimeria spp. na anụ ọkụkọ: - Eimeria acervulina, brunetti, maxima, mitis, necatrix na tenella na ọkụkọ. - Eimeria adenoides, galloparonis na ...
Ivermectine 1.87% Tapawa
Mejupụtara: (6,42 gr nke mado ọ bụla nwere)
Ndị na -enye onyinye csp: 6,42 g.
Ihe ngosi nke iji
Obere ihe onyonyo siri ike (Cyatostomun spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylcostephanus spp., Gyalocephalus spp.) Ụdị tozuru oke na emebeghi nke Oxyuris equi.
Parascaris equorum (ụdị tozuru oke na larves).
Trichostrongylus axei (ụdị tozuru oke).
Dictyocaulus arnfieldi (nje ngụgụ).
Neomycin sulphate 70% ntụ ntụ mmiri
Neomycin sulphate 70% mmiri soluble ntụ ntụ NKWU: Nwere kwa gram: Neomycin sulphate …………………… .70 mg. Mgbasa ozi ụgbọ ……………………………………………. .1 g. NKỌWA: Neomycin bụ ọgwụ nje nje aminoglycosidic nke nwere nje dị iche iche yana arụrụ ọrụ megide ụfọdụ ndị otu Enterobacteriaceae dịka Escherichia coli. Usoro ya dị na ọkwa ribosomal. ...
Albendazole 2.5%/10% ngwọta ọnụ
Albendazole 2.5% Ngwọta ọnụ ọnụ mejupụtara: nwere otu ml: Albendazole ……………… .. 25 mg Solvents ad ……………………. -ndị na -eme ihe megidere ikpuru sara mbara yana n'ọkwa usoro ọgwụ dị elu yana megide ọkwa okenye nke imeju umeji. Ngosipụta: Prophylaxis na ọgwụgwọ ọrịa na -efe efe n'ime ụmụ ehi, ehi, ewu na atụrụ dị ka: ikpuru eriri afọ: Bunostomu ...
gentamicin sulphate10% +doxycycline hyclate 5% wps
gentamicin sulphate10% +doxycycline hyclate 5% wps Mebere: ntụ ntụ gram ọ bụla nwere: 100 mg gentamicin sulphate na 50 mg doxycycline hyclate. Ụdị ọrụ dị iche iche: Gentamicin bụ ọgwụ nje nke otu amino glycosides. O nwere ọrụ nje megide nje bacteria Gram-positive na Gramnegative (gụnyere: Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., E. coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococci). Ọzọkwa ọ na -arụ ọrụ megide Campyl ...
Tetramisole 10% ntụ ntụ mmiri
Tetramisole Powder Powder 10% MGBE: gram 1 ọ bụla nwere tetramisole hydrochloride 100mg. Nkọwa: White crystalline ntụ ntụ. PARMACOLOGY: Tetramisole bụ anthelmintic n'ịgwọ ọtụtụ nematodes, ọkachasị na -arụ ọrụ megide nematodes eriri afọ. Ọ na -akpọnwụ ikpuru nwere ike ịdaba site n'ịkpalite nematode ganglia. Tetramisole na -abanye n'ọbara ngwa ngwa, na -esi na feces na mmamịrị apụta ngwa ngwa. Nkọwa: Tetramisole 10% dị irè n'ịgwọ ascariasis, ho ...
Albendazole 250 mg/300mg/600mg/2500mg bolus
Albendazole 2500 mg Bolus Composition: Nwere n'ime bolus: Albendazole …………………………………………… .. 2500 mg Nkọwa: Albendazole bụ anthelmintic sịntetik nke bụ nke otu ihe mgbapụta benzimidazole nwere ọrụ megide ikpuru dị ukwuu yana n'ọkwa onunu ogwu dị elu yana megide ọkwa okenye nke imeju umeji. Ihe ngosi: Prophylaxis na ọgwụgwọ arụrụ arụ n'ime ụmụ ehi na ehi dịka: G ...
Metamizole sodium 30% ntụtụ
Ọgwụ metamizole sodium 30% ml ọ bụla nwere metamizole sodium 300 mg. NKỌWA Ngwọta doro anya na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ na-acha odo odo dị ntakịrị ihe ngosipụta ọnya afọ Catarrhal-spasmatic colic, meteorism na afọ ntachi afọ n'ime ịnyịnya; spasms nke akpanwa cervix n'oge ọmụmụ; mgbu nke urinary na biliary; neuralgia na nevritis; nnukwu afọ ọsịsa, yana nnukwu mwakpo afọ, iji belata mgbakasị anụmanụ na ịkwadebe ha maka afọ la ...
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /9
Adress: Ime ụlọ 2210, Owuwu A, Yihongxia, 298 Zhonghuabei Street, District Xinhua, obodo Shijiazhuang, Province Hebei, China
Usoro ọgwụ akwadoro maka broi ...
Uru ọgwụ anụ ọhịa dị ala bụ ...
2021 ozuzu okuko, nnukwu variab ...
Ọdịiche dị n'etiti ngwakọ nri na ...